Kuthiwani uma kwakukhona obomvu ngolimi iphuzu?
Isikhombi sokuthi isimo jikelele zomzimba womuntu, ikakhulukazi pheshana emathunjini, zinjalo izici ulimi, njengoba izindawo, amachashazi, ngibuka ibhodi. Uma kwakukhona izindawo abomvu olimini, uqwembe noma unezilonda, wazi ukuthi kufanele sihambe ukuba udokotela wamazinyo. Lezi zimpawu zingase zibe izimpawu zezifo ezihlukahlukene we ngalo ingaphakathi ngomlomo, ezifana glossitis, stomatitis, i-herpes, candidiasis. Udokotela sizohlola, libeke ukuhlolwa ezidingekayo, linqume ukwelashwa okuphumelelayo.
Uma uhlobo nestomatologicheskoy lesi sifo kufanele uvakashele wenhliziyo noma gastroenterologist njengoba obomvu ngolimi iphuzu ngezinye izikhathi isignali kwezinye izifo sokuhamba kwegazi noma ipheshana emathunjini. Lokhu kungaba liyokwahlulelwa khona ophuzi emhlabeni abarimi, wahlela ngesimo amazwekazi nasolwandle namachashaza ulimi. kwezulu okunjalo kungenzeka abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa. Lokhu kubhekwa evamile futhi akufanele kubange ukukhathazeka okuningi.
Lapho amachashazi abomvu olimini imbangela ukulunywa, kukhona amathuba okuthi igciwane okungukuthi athathelwana ngokuthintana noma kukhanyisa amaconsi sisemoyeni, noma i-herpes zoster ukutheleleka. Ezimweni ezinjalo ngokuvamile ephelezelwa imfiva, Ukugodola, ukucobeka. Phakathi kwezinye izifo kungenzeka ungakwazi ukuhlukanisa isifo beriberi (at ukuntula vitamin B12), yensimbi ukuntula kwegazi, erythema, aphthosis, ugcunsula.
Ubungozi ukuthuthukiswa isimila
Ngokuvamile amaphuzu ulimi zibangelwa yokuphazamiseka umsoco, ukudla, noma ukusabela iguliswa ukusetshenziswa incongruous nomunye imikhiqizo, izidakamizwa notshwala. Ingaphezulu ulimi kungase athutha ohlukumezekile, isib, lollipop, noma ukudla kushisa kakhulu noma okubabayo ucasukile. Ukudla ukudla okubabayo nokubhema njalo abangele ukwakheka ku ulimi ezimhlophe izindawo noma mpunga. Abanaso abangela ingozi engakafihleki ngokushesha ezempilo, Nokho, kukhona kungenzeka yentuthuko isimila, hhayi ngempela ingozi.
Mayelana izifo ebuntwaneni
Ukuvela ezinganeni ngolimi, amachashazi abomvu kungase kubonise isifo noma ebomvu imfiva syndrome Kawasaki isifo ngaphambi kokuphela omsakazo akucacile. Kukhona kucatshangwa ukuthi lokhu kuyinto isifo sokuhlasela kwamasosha omzimba uye nsuku zofuzo.
ukubukeka qwembe elimhlophe, ophuzi
Hhayi nje kuphela izindawo abomvu olimini kungabangela ukukhathazeka. White obukhulu nolimi enamathela kubonisa, cishe, ku ukwephula pheshana emathunjini, ukuqunjelwa aphoqelelwayo noma ubuthi. Imbangela-plaque ophuzi kungenzeka ukusebenza okungavamile esinyeni emphinjeni noma nenyongo. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi juicier qwembe umbala, kakhulu lesi sifo, ebizelwa. Kunoma ikuphi, akufanele imisiwe isikhathi eside ukubona udokotela. Uyamisa ukuxilongwa futhi libeke Yiqiniso kudingekile zokwelapha kanye nemithi.
Ukuze ugweme ukuwohloka nokuthuthukiswa kwaleso sifo, kufanele ngaphandle kusukela ekudleni, utshwala nokudla okunongwe ngokuphelele ukufeza inhlanzeko we ngalo ingaphakathi ngomlomo. Ngenxa yale njongo, izixazululo manganese efanelekayo noma furatsilina njengoba uhlambulule noma lotions.
Stroke: izimpawu, ukwelashwa, imiphumela
Ulwazi olubalulekile kubo bonke; chromophytosis iphathwa?
Kungani-ke yezinkinga eziyingozi ngakho sikashukela?
Hyperprolactinemia - kuyini? Kanjani hyperprolactinemia? ukwelashwa
Trisomy 21: Amanani evamile
Gomel State University okuthiwa Skaryna. Izibuyekezo University
Engagqwali Electric kettles: ukukhetha, iseluleko kanye nezincomo.
Abkhazia. Uphi nokuthi ungafika kanjani
Uhlelo ukususa Tinsita. Ithuluzi best for nokususa izinhlelo
Kokungenela Humanitarian - inselele ngokuqondile umqondo yobukhosi?
Injongo yokuthuthuka futhi Sikhungo